कोरोना, सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष र विरोधीहरू – कामना डेली
On २०७७ बैशाख ५, शुक्रबार १८:३२ Last updated Apr 18, 2020
नरेश राना, जाजरकोट। शक्ति सम्पन्न एवम् अपेक्षाकृत कमजोर र अत्यन्त कमजोर राष्ट्रहरू यतिबेला बुताले भ्याएसम्म नोबेल कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड–१९ सँग जुधिरहेका छन्। सिंगो मानव प्राणीलाई चुनौती दिइरहेको उक्त भाइरसले मुलुकभरका आम मानिसहरूलाई त्रसित पारेको छ। दिन दुगुणा रात चौगुणाको दरले फैलिरहेको यो भाइरस सम्भवतः २१ औँ शताब्दीको महामारी बन्नसक्छ। सयौँ मुलुकका लाखौँ मानिसको चिहान बनायो। कोरोनाकै संन्त्रासका बिच अहिल मुलुकमा सन्नाटा छाउनुका साथै शोकमा परिणत भएको छ। काबुभन्दा बाहिर नगएको कोरोनाले नेपालको हकमा खेलाचीको उपमा पाएको छ। कयौँ मुलुकका मानव प्राणीको जीवन रक्षामाथि चुनौती थपिदिने कोभिड–१९, के हाम्रालागि खेचाली नै होला त? यो हामीमाथि तेर्सिएको एउटा गम्भीर प्रश्न हो। यस प्रश्नका खातिर हाम्रो देशमा कोरोना भाइरको जोखिमको सेरोघेरोमा सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष र विरोधी तत्वहरूले के गर्नुपर्छ ?
पश्चिम नवलपरासीमा बैंक खुल्ने तालिका थाहा नहुँदा सास्ती
सम्पर्क इमेलः kamanadaily[email protected]